AutoCAD 2016. Ọgwụgwụ nke ebighi-ebi ikikere.
Dịka usoro okike nke ụwa a, jikọtara ọnụ, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-atụghị anya ya, sọftụwia abụghịzị ngwaahịa igbe ma bụrụ ọrụ. AutoDesk abụghị naanị na anyị na-ahụ Adobe, Bentley Systems, Corel, ịkpọ aha ole na ole. AutoDesk ekwuputala na afọ a 2015 ga-abụ nke ikpeazụ ...
Na obi ụtọ dị ukwuu anyị na-ahụ na a n'ihu mbụ version of gbasara ohere Manager maka Bricscad, otú ọrụ nwere ike ugbu a ime ka eji GIS eme na a ala-na-eri CAD software.
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, mbụ echiche
Ịgbanwe a DGN file ED50 ka ETRS89
A na-agbakarị ndị ọrụ GIS ka ha gbanwee data CAD na sistemụ nrụtụ aka. Anyị na-ekwu ihe ịma aka n'ihi na, n'ọtụtụ ọnọdụ, mgbanwe a gụnyere ọrụ dị egwu nke na-enye anyị ohere ịchekwa ọtụtụ ozi dị ka o kwere mee site na data mbụ. Ọ bụ ihe ijuanya na ọrụ a na Microstation bịa, mana n'ezie maka ndị ahụ ...
AutoCAD N'ezie 3D n'ọnụ ụzọ gị, maka $ 34.99
Ọ bụ Usoro Nduzi Ozugbo, nke enwere ike zụta ugbu a ma nata n'ọnụ ụzọ ụlọ maka ọnụahịa nke US $ 34.99. Ngwaahịa ahụ gụnyere: Usoro zuru ezu nke AutoCAD 2D na 3D na vidiyo 477 dị mfe iji nyocha isiokwu niile faịlụ ntanetị nke eserese 17,000 dwg ...
AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS
Mụta AutoCAD Ile Ihe
Taa enwere ọtụtụ nkuzi AutoCAD n'efu na ịntanetị, nke a anyị ebughị n'uche ịmegharị mbọ ndị ọzọ megoro, kama iji mejuputa onyinye na-eweta ihe mgbochi n'etiti usoro a na-akọwa iwu niile na eziokwu nke onye ọrụ ahụ maara na mbụ iwu ndị ahụ amaghị ebe ha ga-ebido. ...
AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS, Video
2 Developments na geospatial ebe a na-apụghị ileghara anya
Afọ amalitela site n'ike dị ukwuu site na ụlọ ọrụ ndị raara onwe ha nye mpaghara ọzụzụ, anyị na-eji ohere nke isiokwu a iji kwalite ụfọdụ ihe ọhụrụ dị n'okwu a, na oge ụfọdụ anyị na-enye ngwaahịa, onye anyị na-ekwu okwu banyere ya kemgbe afọ gara aga; nke dị n'echiche anyị pụrụ iche ...
Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS, innovations
Dị ka ike a ngọngọ ke Microstation (Cell)
Na Microstation a na-akpọ mgbochi ndị ahụ Cells (sel) n'agbanyeghị na n'ọnọdụ ụfọdụ anụwo m na a na-akpọkwa ha mkpụrụ ndụ. N'isiokwu a anyị ga-ahụ otu esi eme ya na mgbagha nke na-eme ka ha dị iche na mgbochi AutoCAD. N'adịghị ka SIG, ebe ihe atụ dị ike site na ...